Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. नेपाली कबड्डी टोली १३ औँ सागमा स्वर्ण हात पार्ने तयारीमा – Emountain TV
नेपाली कबड्डी टोली १३ औँ सागमा स्वर्ण हात पार्ने तयारीमा
काठमाडौं, २६ भदौ । १२ औँ सागमा काँस्य पदक हात पारेको नेपाली कबड्डी टोली अब स्वदेशमा नै आयोजना हुन लागेको १३ औँ सागमा स्वर्ण हात पार्ने आशमा छ । स्वर्णका लागि तयारी गरेपनि प्रशिक्षणका लागि पर्याप्त हल र म्याटको व्यवस्था नहुँदा सोचेअनुसार प्रशिक्षण हुन सकिरहेको छैन । आफुहरुले खेल्नका लागि पर्याप्त खेलस्थलका साथै जर्सी समेत प्राप्त नभएको खेलाडीहरुको गुनासो छ ।
१३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला कबड्डी टोली अहिले सुन्धारास्थित नेपाली सेनाको एन सी सी हलमा प्रशिक्षणरत छ । १२ औँ सागमा काँस्य पदक हात पारेको टोली अब स्वदेशमानै आयोजना हुन लागेको १३ औँ सागमा स्वर्ण हात पार्ने आशमा छ । गत साउन १६ गतेदेखि महिला तर्फ २८ र पुरुषतर्फ २८ जना खेलाडीहरु बन्द प्रशिक्षणमा प्रशिक्षणरत छन् । छनोटको विभिन्न चरणहरु पार गर्दै हाल २१ जना महिला तथा २१ जना पुरुष गरि कुल ४२ जना खेलाडी दोस्रो चरणमा छानिएका छन् ।
आफ्नो तर्फबाट खेलाडीहरु भरपुर मिहेनेत गरीरहेका छन् तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद तथा कबड्डी महासँघले प्रदान गरिरहेको हालको सेवा सुविधाबाट भने उनिहरु निराश छन् । प्रशिक्षणका लागि पर्याप्त हल र म्याटको व्यवस्था नहँुदा आप्mनै पहलमा नेपाली सेनासँग पहल गरेर जसोतसो तयारी गरिरहेको नेपाली कबड्डी टोलीका मुख्य प्रशिक्षक तारासिंह भाट बताउनुहुन्छ । त्यस्तै खेलकुद क्षेत्रमा बढ्दो राजनितीकरणका कारण खेलको महत्व नबुझेका व्यक्तिहरु माथिल्लो निकायमा पुगेकाले सम्पुर्ण खेलजगतकै विकाश हुन नसकेको प्रशिक्षका भाटको गुनासो छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आफुहरुलाई प्रदान गरीरहेको दैनिक १ हजार ४ सय रुपैया अपुग रहेको खेलाडीहरुको गुनासोे छ । आफुहरुले खेल्नका लागि पर्याप्त खेलस्थलका साथै जर्सी तथा अन्य खेल सामाग्रीहरु समेत प्राप्त नगरेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।
घरेलु मैदानमा नै आयोजना हुन लागेका १३ औँ साग खेलकुद नेपालका लागि कबड्डीमा पहिलो पटक स्वर्ण हात पार्दै इतिहास रच्ने सुनौलो अवसर हो । तर, यसका लागि उतिकै कडा मिहेनेत र प्रशिक्षणको आवश्यकता देखिन्छ साथै खेलाडीहरुको गुनासोलाई सम्बन्धित निकायले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।